कार्यकर्ताको लागि ! | BUSINESS PATI | Economical Online News Portal
कार्यकर्ताको लागि !
साउनेघरी झम-झम परिरहेको थियो। विमलेन्द्र निधीले कौशीमै बसेर साउनेझरीको आनन्द लिईरहेका थिए। त्यहीबेलामा पीएले एसपी मीरा चौधरीलाइ धनुषा पोष्टिङ्ग गरेको खबर सुनायो। खबर सुन्नासाथ निधीले, ‘यो मीरा चौधरी कस्ती हुन् ?’ भनेर वुझे। वुझ्दा, ‘मीरा चौधरी त रामदत्त जोशी भन्दा पनि खरो छिन्’ भन्ने जानकारी पाए। यो जानकारी र रामदत्त जोशीको नाम आउनासाथै विमलेन्द्र निधीले विगतको स्थिति झल्झलि सम्झे। त्यसबेलाका दृश्यहरु उनको मानसपटलमा सर्सर्ति आउनथाल्यो। छर्लङ्गै सम्झे, “धनुषाको फुलगामा गाउँका रामचन्द्र रायले पुर्ख्यौली सम्पत्ति लट्पट्याएर आफ्नो सोझो दाज्यु इन्द्रकान्त रायमाथि भयङ्कर अत्याचार गरेको बिषयमा त पहिले-पहिले पनि चर्चा सुनेकै हुँ। तर, दाज्युमाथि जति अत्याचार गरेपनि रामचन्द्र राय मेरो बफादार कार्यकर्ता भएकोले हामी मौन नै बस्यौं। २०७३ भदौतिरै हो, पुर्ख्यौलि सम्पत्ति सबै हत्याएको अत्याचार खप्ननसकेर दाज्यु इन्द्रकान्त रायले भाइसँग केही सवाल राखेछ। दुईपटकसम्म सवाल गर्दा भाइ रामचन्द्र राय मौन बसेछ।
तेश्रोपटक पुन सवाल गरेपछि एक्कासि झम्टेर लाठीमुङ्ग्री बर्षाएछ। दाज्यु इन्द्रकान्तको निम्छरो ज्यानले चुटाई खप्न नसकेर एकै डल्लो भएर थला परेछ। ‘मर् यो’ भनेर फालेछ। पछि अरु मान्छेले हेर्दा ढुकढुकी सास बाँकि देखेर अस्पताल लगेछन्। प्रहरीमा जाहेरी दर्खास्त दिएछन्। प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेर रामचन्द्र रायलाइ पक्डेछ। मेरो बफादार कार्यकर्तालाइ पक्डेको खबर पाएपछि मैले तुरुन्तै धनुषाका एसपीलाइ फोन गरें र, ‘रामचन्द्र रायलाइ अहिले तुरुन्तै छाडिहाल्नु’ भनें। त्यसबेला धनुषामा एसपी रामदत्त जोशी थिए। रामदत्त जोशीले, ‘प्राणै लिनेगरि चुटेको रहेछ। चुटाई खाने इन्द्रकान्त राय मर्नेबाँच्ने ठेगान छैन। यस्तो स्थितिमा रामचन्द्र रायलाइ अहिले छाड्न सकिंदैन हजुर’ भनेर ब्रिफिङ पो गर्छ। जति कडा आदेश गर्दापनि छाड्ने सुर लिएन। अनि मैलेपनि, ‘दायाँबायाँ केही नसोचि, शक्तिकेन्द्रको आशयमा आँखाचिम्लेर कुद्ने एसपी को छ ?’ भनेर वुझें। ‘विवेकविचार सबै बन्धकमा राखेर र कागजपत्र श्रेस्ता टाकटुक् मिलाएर, शक्तिकेन्द्रको इशारामा चल्ने एसपी त लालमणि आचार्य हुन्’ भन्ने जानकारी पाएँ। त्यही दिन लालमणि आचार्यलाइ धनुषा खटाएँ। विवेकविचारको कुरा गर्ने र ऐननियम मुताविक चल्नखोज्ने एसपी रामदत्त जोशीलाइ हटाइदिएँ। वास्तवमै लालमणि आचार्य त आफ्नै पार्टीको मेरो खास बफादार कार्यकर्ता भन्दापनि बफादार रहेछन्। तिनले त मेरो दिलखुश पारे। उनीसँग म अति प्रशन्न छु।”
चलचित्रका दृश्यसरी उपरोक्त स्थिति सबै झल्झल्ति सम्झेपछि विमलेन्द्र निधीले आफैंले डायल गरेर जनार्दन शर्मालाइ फोन गरे। ‘मङ्सिरको निर्वाचन नसकियुञ्जेल लालमणि आचार्यलाइ नचलाउनु, यथावत राख्नु’ भनेर ठाडै अह्राए, र पुन साउनेझरीको आनन्दमा रम्दाभए।
प्रकाशित मिति २०७४-५-२३
‘बागमतीमा फोहोर भेटिन्जेल ग्रीनसिटिले सरसफाइ जारी…
मोदी भ्रमणः दुबै अतिवाद घातक